कहिले बिसाउला सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले तीन अर्ब ७० करोडको दाबी भुक्तानीको भारी ?| Corporate Nepal
कहिले बिसाउला सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले तीन अर्ब ७० करोडको दाबी भुक्तानीको भारी ?
भदौ ३०, २०७८ बुधबार १३:५५
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्यारेन्सले बीमितको अर्बौं रुपियाँँको दावी भुक्तानी गर्न अझै अटेर गरेको छ । महाकाली नदीको बाढीले तीन अर्ब ७० करोड रुपियाँ सम्पत्ति बगाएपछि परेको दावी भुक्तानी गर्न सिद्धार्थले आनाकानी गरेको हो ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा बीमा गर्ने सुशील श्रेष्ठ नामका बीमितले आफ्ना निर्माण सामग्रीको क्षति भएपछि त्यसको मूल्यांकन गरी रकम दावी गर्दै आएका छन् । बीमा गरेको सम्पत्ति नष्ट भएकाले नियमानुसार दावी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा पटक पटक आग्रह गर्दा पनि रकम दिन आनाकानी गरिँदै आएको पीडित श्रेष्ठले बताए ।
उनले लामो समय भइसक्दा पनि दाबी भुक्तानीमा कुनै चासो नदिएको बताए । यस विषयमा सोध्न कर्पोरेट नेपालले पटक पटक फोन र एसएमएस गर्दा पनि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वीरेन्द्र बैद्यवार क्षत्रीले प्रतिक्रिया दिएनन् ।
यसअघि यस दावी भुक्तानीका विषयमा सोध्दा उनले बुझेर लेख्न सुझाव दिएका थिए । बीमितले निर्माण सामग्रीको बीमा गराएका थिए । नदीमा बाढी आएर सामानको क्षति भएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम भए पनि कम्पनीले आँकलन गरेको भन्दा सानो बाढीमा निर्माण सामग्री नष्ट भएको तर्क गर्दै दावी भुक्तानीमा ढिलाई गरेको खुलासा भएको छ ।
बीमितले सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले माग गरेका सबै काजग पत्र दिन आफू तयार रहेको भए पनि कम्पनीले पैसा दिन आनाकानी गरिरहेको गुनासो गरे । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘हामीले त कम्पनीले मागेको सबै कागज पत्र दिन्छौं । तर, बीमा कम्पनीले भने पैसा दिन ढिलाई गर्दै आएको छ । मैले सबै क्षतिको विवरण हेर्नुस्, मूल्यांकन गर्नुस् । र, दावी भुक्तानी दिनुस भनेको हो । यस पटक मात्रै मैले बीमा गरेको सामानको क्षति भएको हो ।’
आफ्नो बीमा दावी ठूलो भएकाले भुक्तानी दिन कम्पनीलाई कठिनाई भएको हुनसक्ने श्रेष्ठले बताए । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘बीमाले पैसा नै नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन् । चाँडै गरिदियोस भन्ने आशा हो ।’ आफूले मिडियाले दावी भुक्तानी गर्न ढिलाई गर्यो भनेर बोल्दै हिँड्दा झन उसले ढिलाई गर्ने र बहाना बनाउने हो कि ? भन्ने रहेको बताउँदै उनले तर दावी भुक्तानी पाउने कुरामा आफूलाई शंका नरहेको बताए ।
श्रेष्ठले भने, ‘खै कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिन्न नै त भनेको छैन । उसै त बीमाको पैसा ढिलै आउँछ । त्यसमाथि मेरो तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको छ ।’ कम्पनीले भुक्तानी दिन झन ढिलाई गर्नसक्ने डरले उनले धेरै कुरा बोल्न चाहेनन् । तर उनीनिकट अर्का व्यक्तिले भने सिद्धान्र्थ इन्स्योरेन्सले दावी भुक्तानीमा निकै दुःख दिइसकेको बताए ।
उनले भने, ‘बीमा कम्पनीले आकर्षक देखाउँदै बोलाउने । जब दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला झमेला गर्छन् ।’
२४ लाख सवारी साधन बीमाको पहुँच बाहिर
कात्तिक ३, २०७८ बुधबार
निर्जीवन बीमाको प्रिमियम बढाएकोमा निजी क्षेत्रका संस्थाको आपत्ति, तत्काल सच्चाउन माग
भारतीय बीमा बजारमा निर्जीवनतर्फको हिस्सा कमजोर बन्दै, शेयर बजारका खेलाडीलाई चुनौती
बीमा प्रवद्र्धन र समस्या सुधारका लागि बीमा समिति के गर्दैछ ? पौडेलको जवाफ